Once Upon A Time In Hollywood (2019) - Myanmar Subtitle Movies - မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ - Myanmar Tube
BS HDUnknown resource
CW HDUnknown resource
MD HDUnknown resource
Once UponaTime in Hollywood (2019) – Myanmar Subtitle Movies – မန်မာစာတန်းထိုးဇာတ်ကားများ
In this town, it can all change… like thatJul. 25, 2019USA162 Min.R
Watching Once UponaTime in Hollywood Myanmar Subtitle Movies (မွနျမာစာတနျးထိုး) On Myanmar Tube
တဈခါတုနျးက ဟောလိဝုဒျမှာ ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျလေးကို တငျပေးလိုကျပါတယျ။ဒါကတော့ ရုပျရှငျ ၁၀ ကား ရိုကျပွီးရငျ အနားယူပါတော့မယျဆိုတဲ့ ဂန်ဓဝငျဒါရိုကျတာကွီး ကှငျတငျ တာရနျတီနိုရဲ့ ၉ ကားမွောကျရုပျရှငျပါပဲ။အရငျရှဈကားကတော့ Django Unchained (2012) … The Hateful Eight (2015) … Death Proof (2007) …Inglourious Basterds (2009) … Reservoir Dogs (1992) … Kill Bill: Vol. … Kill Bill: Vol. … Jackie Brown (1997) ဆိုတဲ့ကားတှပေါပဲ။
ဒီရုပျရှငျကတော့ ဟောလိဝုဒျခတျေဟောငျးကို ပွနျတမျးတဖို့ သရုပျဖျောထားတဲ့ ရုပျရှငျပါပဲ။ခတျေဟောငျးကောငျးဘှိုငျကားအကွောငျးတှေ၊ ဟောလိဝုအထာတှေ၊ အဲဒီခတျေရဲ့ ဟဈပီတှနေဲ့ ပုံဖျောထားတာပါပဲ။လီယိုနာဒို၊ ဘရကျပဈ၊ မာဂေါ့ ရျောဘီ တို့ အဓိက ပါဝငျထားပါတယျ။လီယိုနာဒိုကတော့ ရဈချ ဒယျတနျဆိုတဲ့ နာမညျကဆြငျးနတေဲ့ ဟောလိဝုဒျ မငျးသားပေါ့။တဈခြိနျကတော့ ဂြိတျကဟေေးဆိုတဲ့ ကောငျးဘှိုငျဇာတျကောငျနဲ့ ပေါကျခဲ့ဖူးခဲ့သူပါ။အခုတော့ ဇာတျလမျးတှဲလေးတှမှော ဗီလိနျလိုကျလုပျပေးနရေပါပွီ။သူ့ရဲ့ စတနျ့အရံကတော့ ကလဈဖျ ဘုသျ ( ပရကျပဈ) ပါပဲ။သူကတော့ ရဈချရဲ့ မိတျဆှကေောငျးအဖွဈ အတူရုနျးကနျနတေဲ့သူပေါ့။မာဂေါ့ရျောဘီကတော့ ဟောလိဝုဒျနာမညျကြျော ဒါရိုကျတာ ရိုမနျ ပိုလနျးစကီးရဲ့ မိနျးမအဖွဈ သရုပျဆောငျထားပါတယျ။မထငျရှားသေးတဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျရဲ့ အခွအေနကေိုလညျး ပွထားတာပေါ့။သူတို့တှကေို အခွခေံပွီး ဟောလိဝုအထာ၊ ဟဈပီတှေ၊ အီတလီရုပျရှငျတှနေဲ့ ၁၉၆၀ ဝနျးကငျြ ရှခေတျေကို ပုံဖျောပွထားတာလေးကို လှလှပပ ခံစားကွညျ့ရမှာပါ။ဘောနကျဈအနနေဲ့တော့ ဘရုဈလီဇာတျကောငျကိုလညျး တှရေ့ပါလိမျ့ဦးမယျ။ ဘရုဈဖနျတှတေော့ နညျးနညျးထိရှမလားပဲ။
တစ်ခါတုန်းက ဟောလိဝုဒ်မှာ ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ ရုပ်ရှင် ၁၀ ကား ရိုက်ပြီးရင် အနားယူပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ ဂန္ဓဝင်ဒါရိုက်တာကြီး ကွင်တင် တာရန်တီနိုရဲ့ ၉ ကားမြောက်ရုပ်ရှင်ပါပဲ။အရင်ရှစ်ကားကတော့ Django Unchained (2012) … The Hateful Eight (2015) … Death Proof (2007) …Inglourious Basterds (2009) … Reservoir Dogs (1992) … Kill Bill: Vol. … Kill Bill: Vol. … Jackie Brown (1997) ဆိုတဲ့ကားတွေပါပဲ။
ဒီရုပ်ရှင်ကတော့ ဟောလိဝုဒ်ခေတ်ဟောင်းကို ပြန်တမ်းတဖို့ သရုပ်ဖော်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါပဲ။ခေတ်ဟောင်းကောင်းဘွိုင်ကားအကြောင်းတွေ၊ ဟောလိဝုအထာတွေ၊ အဲဒီခေတ်ရဲ့ ဟစ်ပီတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာပါပဲ။လီယိုနာဒို၊ ဘရက်ပစ်၊ မာဂေါ့ ရော်ဘီ တို့ အဓိက ပါဝင်ထားပါတယ်။လီယိုနာဒိုကတော့ ရစ်ခ် ဒယ်တန်ဆိုတဲ့ နာမည်ကျဆင်းနေတဲ့ ဟောလိဝုဒ် မင်းသားပေါ့။တစ်ချိန်ကတော့ ဂျိတ်ကေဟေးဆိုတဲ့ ကောင်းဘွိုင်ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပေါက်ခဲ့ဖူးခဲ့သူပါ။အခုတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးတွေမှာ ဗီလိန်လိုက်လုပ်ပေးနေရပါပြီ။သူ့ရဲ့ စတန့်အရံကတော့ ကလစ်ဖ် ဘုသ် ( ပရက်ပစ်) ပါပဲ။သူကတော့ ရစ်ခ်ရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် အတူရုန်းကန်နေတဲ့သူပေါ့။မာဂေါ့ရော်ဘီကတော့ ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာ ရိုမန် ပိုလန်းစကီးရဲ့ မိန်းမအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။မထင်ရှားသေးတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကိုလည်း ပြထားတာပေါ့။သူတို့တွေကို အခြေခံပြီး ဟောလိဝုအထာ၊ ဟစ်ပီတွေ၊ အီတလီရုပ်ရှင်တွေနဲ့ ၁၉၆၀ ဝန်းကျင် ရွှေခေတ်ကို ပုံဖော်ပြထားတာလေးကို လှလှပပ ခံစားကြည့်ရမှာပါ။ဘောနက်စ်အနေနဲ့တော့ ဘရုစ်လီဇာတ်ကောင်ကိုလည်း တွေ့ရပါလိမ့်ဦးမယ်။ ဘရုစ်ဖန်တွေတော့ နည်းနည်းထိရှမလားပဲ။
Original title : Once UponaTime… in Hollywood
Genre : Drama,Comedy,Thriller
IMDb Rating 7.8 296,296 votes
TMDb Rating 7.5 3,508 votes
Download HD 720p မြန်မာ 1.95 GB 15
Download HD 720p မြန်မာ 1.3 GB 16